ဒူဒူကြီး: Generator Synchronizing, Parallel Operation နဲ့ Load Sharing (၁)
Generator Synchronizing, Parallel Operation နဲ့ Load Sharing (၁)
ကိုအောင်ဇော်ဦး။ Generator (၂) လုံး parallel operation နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မရှင်းတာလေးရှိလို့ပါ။ ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ မျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ generators (၂) လုံးကို synchro လုပ်တယ်။ ပြီးတော့ Load sharing adjust လုပ်ပြီး (၂၀) % load တင်ပြီးစမ်းတာ၊afew minute အတွင်း generator (၁) လုံး trip ဖြစ်ပြီးပြုတ်ကျသွားတယ်ဗျာ။ ခက်တာက voltage , frequency, line အားလုံးတူတယ်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ generator (၁) လုံးစီမောင်းရင်တော့ အဆင်ပြေတယ်၊ ငြိမ်နေတာပဲ။ ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။
ကိုထွန်း။ (20) % Load ဆိုတာ KW Reading အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ဆိုပြီး ကိုအောင်ဇော်ဦး ဖော်ပြ မထားပါဘူး။ အတွေ့အကြုံအရတော့ Generator တစ်လုံးစီမှာ၊ (20) % Load ဆိုတာ၊ အန္တရယ်များတဲ့ Load Sharing Condition ပါ။ Reverse Power အချိန်မရွေးဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။ KW Meter တွေကို သတိထားကြည့်ရင် Reading ကို (0) KW ကမစပဲ၊ (30) KW လောက်ကနေ စရေးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ (30) KW လောက် အနည်းဆုံးရှိမှ Load တင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ ACB ရဲ့ Protection System သို့မဟုတ် Load Sharing Programmed ကနေ ဖြုတ်ချလိုက်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။
ကို blessing။ ကိုကြီးထွန်း ရေ၊ ကျနော်ကြားဖူးတာလေးတွေမေးကြည့်တာပါနော်။ ကိုအောင်ဇော်ဦး ပြောသလိုမျိုး Generator (၂) လုံးကို parallel မောင်းမယ်ဆိုရင်၊ မောင်းတဲ့ အချိန်မှာ Generator (၂) ခုလုံး power output တူုရမယ်၊ rpm တူရမယ်၊ မဟုတ်ရင် ကိုအောင်ဇော်ဦး ပြောသ လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားခင်ဗျ။ သဘောကတော့ မတူုရင်၊ တစ်ခုက မော်တာ၊ တစ်ခုက ဒိုင်နမို သဘောမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ် ဆိုလိုတာမျိူးပါ။
ကိုလင်း။ သီအိုရီ သိသလောက်အရဆိုရင်တော့၊ Reverse Power Relay က ဖြုတ်ချတာ ထင်ပါတယ်၊ ကျနော်ကတော့ (50) % load လောက်ရှိမှ synchro တင်ပါတယ်၊ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ စက်တလုံးစီသာ သုံးပါတယ်၊
ကိုထွန်း။ ကိုလင်း ရေ၊ Load အရမ်းနည်းနေ တာမို့ Generator ကို၊ Motorizing Effect မဖြစ်စေဖို့ ACB ရဲ့ Reverse Power Relay က ကိုလင်း ယူဆသလိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်လို့ ကျွန်တော်လည်းယူဆပါတယ် ခင်ဗျား။
ကိုထွန်း။ ကို blessing ရေ၊ Running နဲ့ Incoming Generator (၂) လုံး၊ RPM တူတယ်ဆိုတာ Frequency အနီးစပ်ဆုံးတူတာပါ။ ဒါပေမယ့် Parallel မောင်းလို့ မရသေးပါဘူး။ Running Generator နဲ့ Incoming Generator တို့ရဲ့ Frequency တွေဟာ Leading ဒါမှမဟုတ် Lagging ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ Synchro-scope တို့ Synchro Lamp တို့နဲ့ Detect လုပ်စေပြီး Generator Engine Governor ကို လိုအပ် သလို Adjust လုပ်ရပါတယ်။ Frequency modulations တွေ Synchronize ဖြစ်စေဖို့ပါ။ နောက်ပိုင်း မှာတော့ Auto-Synchronizing Unit တွေသုံးကာ ချိန်ညှိပါတယ်။ Parallel မောင်းဖို့ အရေးအကြီးဆုံး ပြင်ဆင်ရတာကတော့ Synchronizing ပါ။ KW, KVA စတဲ့ Out Put ဆိုတာကတော့ Load တင်ပြီးမှသာ တိုင်းတာဖော်ပြတဲ့ Unit/ Reading ပါခင်ဗျား။
ကိုထွန်း။ ကိုအောင်ဇော်ဦး စတင်ဆွေးနွေးတာက Frequency တွေ Synchronize ဖြစ်လို့ Parallel မောင်းကာ၊ Load Sharing လုပ်နေတဲ့ Condition မှာမို့ ပြုတ်ကျစေတဲ့ အချက်ကို ကိုအောင်ဇော်ဦး ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးမှသာ အဖြေရတော့မယ်ထင်ပါတယ်။
ကို Htet Soe Paing။ ကျွန်တော် သင်ရသလောက် ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
Necessity – Alternators may be parallel because of the following reason;
Local or regional power use may exceed the power ofasingle available generator. Parallel alternators allow one or more units to be shut down for scheduled or emergency maintenance while the load is being supplied with power. Generator are inefficient at part load, so shutting down one or more generators allows the remaining load to be carried with less machines that are efficiently loaded.
Load growth can be handled by added machines without disturbing the original installation. Available machine prime movers and generator can be matched for economic first cost and flexible use.
Requirements for paralleling – The requirements for paralleling include;
The voltages must be the same at the paralleling point or junction even though not the same at the alternators. The phase sequence for three phases must be the same at the paralleling point.
The incoming machine must be in phase at the moment of paralleling. It will stay in phase under normal conditions after paralleling. It is important to recognize that phase sequence and in phase are not same thing.
The line frequency must be identical at the paralleling point. The prime-movers must have relatively similar and dropping speed-load characteristic. This is to preventamachine witharising speed load characteristic from taking more and more of the load unit it fails from overload.
The incoming machine must be in phase at the moment of paralleling. It will stay in phase under normal conditions after paralleling. It is important to recognize that phase sequence and in phase are not same thing. The line frequency must be identical at the paralleling point.
The prime-movers must have relatively similar and dropping speed-load characteristic. This is to preventamachine witharising speed load characteristic from taking more and more of the load unit it fails from overload.
Alternator synchronizing procedure – It may logically be assumed that one alternator is placed in parallel with one or more other alternators only when additional load requires it. Those alternators already carrying load are known as the running machines, while that which is to be placed in the system is known as the incoming machine. At the time of synchronizing, the following conditions must be met.
The effective voltage of the incoming alternator must be exactly equal to that of the other, or of the bus-bars connecting them. The phase rotation, or sequence of the running and incoming alternators, must be the same.
The individual phase voltages which are to be connected to be to each other must be in exact phase opposition. The frequencies should be the same, although it is more desirable that the frequencies at the instant of paralleling be almost, but not quite, identical.
Synchronizing Lamps - To satisfy the first condition of parallelingavoltmeter can be use as shown in fig.
Satisfaction of the other conditions of phase sequence, voltage opposition, and frequency may be determined by the use of the incandescent lamps connected between the two machines. At any instant it is seen that the voltage across the lamp is the sum of the individual phase voltages.
The procedural steps for putting incoming alternator in parallel with the running machine are as follows;
Step1- The prime-mover of the incoming machine is start, and the alternator is brought up to near its rated speed.
Step2- By adjusting the field current, the terminal voltage of incoming machine is made the same as that of the running alternator.
The lamp in the circuit will now flicker atarate equal to the difference in frequency of the two alternators. If the phases are properly connected, all lamps will be bright and dark at the same time. If this is not he case, then it means that the phase sequences are not correct, and it is merely necessary to interchange two of the line leads of the incoming machine.
Step3- Further adjustment of the incoming prime-mover is now necessary, until the lamps flicker atavery low rate, usually less than one dark period per second.
Step4-Final adjustment of the incoming voltage again made and the synchronizing switch is thrown in the middle ofadark period. The voltage across the lamps varies from zero to twice the phase voltage, and therefore, the lamps must be rated for this higher voltage. It is not convenient, however to stoke special lamps for this purpose, and two lamps of standard voltage ratings may be connected in series in each line.
ကိုထွန်း။ Parallel Operation မှာ Frequency တွေ Synchronize ဖြစ်မှ အတူတူမောင်းလို့ရမယ်ဆိုပြီး၊ အထက်မှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ Synchronizing မှာ "2 - Lamp Method" နဲ့ "3 - Lamp Method" ဆိုပြီး method (၂) မျိုးရှိပါတယ်။ "2 - Lamp Method" ဆိုတာ လက်ရှိ Load တင်ထားတဲ့ Running Generator ရဲ့ Frequency နဲ့ Incoming Generator ရဲ့ Frequency တွေဟာ Synchronized ဖြစ် သွားတဲ့ အခါ၊ sychro lamp မီးလုံး (၂) လုံးတပြိုင်နက်တည်း မှိတ်သွားတဲ့ Method ကိုခေါါတာဖြစ်ပါတယ်။3- Lamp Method (1 Dark,2Bright Method) ကတော့ Synchronized ဖြစ်ရင်၊ အပေါါထိပ်ဆုံး မီးလုံး မှိတ်သွားပြီး၊ လက်ယာရစ် Clock Wise အစဉ်လိုက်အောက်က မီးလုံး (၂) လုံးလင်းနေမယ့် Method ဖြစ်ပါတယ်။
Fig.2- Lamp Method Synchronizing
Fig.3- Lamp Method Synchronizing
Synchronizing, Parallel Operation နဲ့ Load Sharing ပြုလုပ်ပုံကို ဆွေးနွေးပါ့မယ်။ Incoming Generator ရဲ့ Frequency ကို၊ Synchronizing မလုပ်ခင် Running Generator ရဲ့ Frequency ထက် အနည်းငယ်ပိုကာ တင်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ Load ရှိနေတဲ့ Running Generator ရဲ့ Frequency ဟာ (60) Hz မှာရှိနေရင်၊ Incoming Generator ရဲ့ Frequency ကို (62 ~ 65) Hz လောက်မှာထား ပါတယ်။
အကယ်၍ Incoming Generator ရဲ့ Frequency ဟာ Lagging ဖြစ်နေတဲ့အတွက် နောက်ကျနေခဲ့လျှင် Synchro Scope ရဲ့ လက်တံဟာ၊ လက်ဝဲရစ် counter clock wise direction မှာ၊ ဖြေးဖြေးမလည်ပဲ၊ မြန်မြန်လည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။2- Lamp Method သုံးထားရင် မီးလုံး (၂) လုံးဟာလည်း မြန်မြန် ဆန်ဆန် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် Fast Flicking ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်သလို၊3- Lamp Method သုံးထားရင်တော့ မီးလုံး (၃) လုံးဟာ လက်ဝဲရစ် counter clock wise direction နဲ့လည်နေပြီး မြန်မြန် ဆန်ဆန်၊ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် Fast Flicking ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ Running Generator ရဲ့ Governor ကို တိုးလိုက်၊ လျော့လိုက်နဲ့ လိုသလို Adjust လုပ်ကာ၊ Frequency ချိန်ညှိရ ပါတယ်။
Synchro Scope ရဲ့ မျှားတံဟာ လက်ယာရစ် Clock Wise Position မှာ၊ ဖြေးဖြေးလည်နေပြီး၊ Scope ကို နာရီလိုသဘောထားစဉ်းစားတဲ့အခါ၊ မျှားတံ (၁၁) နာရီ အမှတ်နဲ့ (၁၂) နာရီ ထိပ်တည့်တည့် အမှတ်၊ နေရာရောက်ရင်၊ Incoming Generator ရဲ့ ACB ကို ON ရပါတယ်။ Scope ရဲ့ (၉) နာရီ အမှတ်လောက်မှ၊ စပြီး Synchro Lamp တွေကိုကြည့်ရင် Frequency (၂) ခုဟာ Synchronize ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်၊2- Lamp Method မှာ တပြိုင်နက်တည်း မီးလုံး (၂) လုံးစလုံး မှိတ်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊3- Lamp Method မှာတော့ ထိပ်ဆုံး မီးလုံးက မှိတ်သွားပြီး၊ လက်ယာရစ် clock wise အစဉ်လိုက်အောက်က မီးလုံး (၂) လုံးဟာ လင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Synchro Lamp တွေကျွမ်းသွားတာတို့၊ Synchro Scope ပျက်သွားတာတို့ စတဲ့အခြေအနေမှာ မီးလုံး မရှိပဲ၊ Synchronizing လုပ်တဲ့ နည်းရှိပါသေးတယ်။ ကိုလင်း မှတ်မိသေးရင် ရေးထားခဲ့ပါဦး။
ACB တင်ပြီးတာနဲ့ Scope ကိုချက်ခြင်းပိတ်ရပါတယ်။ ပြီးမှ Running Generator ရဲ့ Load (KW/ KVA) ကို Governor နဲ့လျှာ့ချကာ၊ Incoming Generator ရဲ့ Load (KW/ KVA) ကို Governor နဲ့ တင်ပြီး Increase လုပ်ကာ၊ ညီသွားတဲ့အထိ Load Sharing လုပ်ပါတယ်။
ACB ဖြုတ်ချတဲ့ အခါ Synchro Scope ကို ON စရာမလိုပဲ၊ ဖြုတ်ချမယ့် Out Going Generator ရဲ့၊ Load ကို Governor နဲ့လျှော့ချကာ၊ ကျန်ခဲ့မယ့် Running Generator ရဲ့ Load (KW/ KAV) ကို Governor နဲ့ တင်ပြီး Load Transfer ကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။ Out Going Generator ရဲ့ Load ဟာ (30) KW နီးပါးလောက်အထိကျလာရင် ACB ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်။
တကယ်တော့ Parallel Operation မှ Synchronizing ဆိုတာ၊ Frequency တူမှ မောင်းလို့ရတာဖြစ် ပါတယ်။ Voltage ဆိုတာက Generator Engine ဟာ Rated RPM တခုကိုရောက်တာနဲ့ ထွက်ပါတယ်။ phase တခုခြင်းစီမှ ထွက်လာတဲ့ voltage တွေဟာညီကျပါတယ်။ voltage ဟာရှိရမယ့်တန်ဘိုးနဲ့ သိပ်ကွာနေရင်တော့ Exciter ကို Field Voltage နည်းနည်းလေးထပ်ကြွေးဖို့ Volt Trimmer လေးကို လှည့်ပေးရပါတယ်။
တစ်ခါတလေတော့လည်း Parallel Operation မောင်းလို့ရပေမယ့်၊ incoming generator မှာ၊ Load ဟာ (20 ~ 30) KW လောက်သာရှိပြီး၊ Load ထပ်တင်လို့မရတာ၊ မျိုးရှိပါတယ်။ incoming Generator ရဲ့ Voltage နဲ့ Current ဟာ Resonance အနေနဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျသွားတဲ့အခါ၊ Power Factor တန်ဘိုး ဟာ၊ "0" ဖြစ်သွားတဲ့ အတွက်၊ Load ထပ်တင်လို့ မရတာဖြစ်ပါတယ်။
မအေရာမေ။ Reverse Power Relay ကဖြုတ်ချတာဆိုလျှင်၊ သူ့ကြောင့် Trip ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိသာ လွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ သူ့မှာ Reset ပြန်လုပ်ပေးတဲ့ ခလုပ်ပါတာကို ပုံထဲမှာတွေ့ဖူးလို့ပါ။
မော်ဒယ်မြင့်တဲ့ ACB တွေဆိုရင်လဲ Trip ဖြစ်သွားတဲ့ အခြေအနေရဲ့ မှတ်တမ်းပြန်စစ်လို့ရတယ်လို့ ကြားဖူး ပါတယ်။
ကိုအောင်ဇော်ဦး။ အခုလိုဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ကိုလင်း ပြောသလို reverse power relay ကဖြုတ်ချပါ့မလားလို့ ကျွန်တော်တို့ safety နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေကို calibrate လုပ်ပြီးပြီဗျ။ normal ပဲဗျ။ ကျွန်တော်တို့ operation လုပ်တဲ့ generator က auto load sharing unit မဟုတ်ဘူးနော်။ (20) % load နဲ့ စတင်တာက operation time မှာပေါ့နော်။ နောက် load တွေကိုတင်မလို့လုပ်တုန်းကို ပြုတ်ကျသွားတာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မအေရာမေ ခင်ဗျာ။ ကံဆိုးချင်တော့ သုံးထားတာ၊ တော်တော့်ကို old နေတဲ့ type တွေဗျာ။
Image Credit to : http://metersandinstruments.yokogawa-usa.com/, http://www.fieldlines.com/, http://www.ustudy.in/,
Posted by ဒူဒူကြီး at 20:59